I-Boncoddo - Ukucutshungulwa Kwamamabula Nembozo - Messina
Umsebenzi weBoncoddo Marble nomsebenzi wokuhlanganisa - Messina
IMarble isebenza ama-claddings iminyaka engaphezu kwengu-40
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-18)
I-Boncoddo eMessina, nendlunkulu yayo kuphela eGazzi, iyi-inkampani ekhethekile Ukucutshungulwa kweMabula, Amatshe agolide kanye namatshe zemvelo. Amakhosi kwezobuciko futhi ku Ukukhiqizwa Kweziqongqothokozi Nezimbobo, Boncoddo Marmi dal 1969 inikeza kumuntu ngamunye nezinkampani Ubuhlakani nobungcweti, ngemikhiqizo yekhwalithi esebenza ngamasu athuthukile kakhulu emkhakheni we Ukuvalwa Kwangaphakathi Nokomngcwabo.
Le nkampani iboniswa hhayi kuphela iminyaka eminingi yesipiliyoni se Umndeni kaBonododdo, okufana nesiQinisekiso kanye nokubaluleka, kodwa futhi nokusetshenziswa kwezinto ezisezingeni eliphakeme ezihlanganiswe nesipiliyoni sabaqeqeshiwe abavela kweminye imikhakha ukuqinisekisa Inkonzo ephelele.
USalvatore Boncoddo Marmi eMessina - Isipiliyoni kanye nekhwalithi eMatshe naseMvelo Yemvelo
USalvatore Boncoddo Marmi e Graniti onekomkhulu kuphela eGazzi Messina, isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-40, inikezela abathengi bayo ukuphepha kokuncika ezandleni zabachwepheshe nemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngokwezinto zokwakha kanye nokwenza umsebenzi. Le nkampani, ngenxa yeminyaka eminingi yesipiliyoni esihanjiswe kusuka kubaba kuya kundodana, ikhono labasebenzi abaqeqeshiwe kakhulu nenani eliphakeme lekhwalithi / intengo, manje usengumholi Ukuqhutshwa kwemarble Itshe Yemvelo eMessina kanye nesifundazwe. Ukuqedwa okuhle kuphela, kuphela okokusetshenziswa okungcono kakhulu, kuphela imishini yesimanje kakhulu kanye namasu wokusebenza ngempumelelo kakhulu weProjekthi eyingqayizivele nengaphelelwa isikhathi.
Ukucutshungulwa kweSalvatore Boncoddo Marble - Ubuciko beMisebenzi
USalvatore Boncoddo Marmi Graniti eGazzi Messina bekulokhu kuseshwa njalo ukuthola izixazululo ezintsha zokunikeza amakhasimende ayo, abantu kanye namabhizinisi, imikhiqizo yezinga eliphakeme kakhulu kusukela endaweni yokubukwa kwezinto zokwenziwa nezinqubo zokuhlunga. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-40 inkampani izinikele ekuhlinzekeni insiza enhle kakhulu ngezinto zokwakha ezintsha nemishini yesimanje kakhulu yokwenza imikhiqizo evelela ikhwalithi yabo nobungcweti obuhle. Ukuhlangenwe nakho nentshisekelo yezobuciko futhi sekwenze umholi weBonodod Marmi eMessina kuUbuciko bomngcwabo, imisebenzi yakhe engcwele nezethulo zinikezwe kaninginingi futhi zamukelwa idolobha Messina.
I-Salvatore Boncoddo Marble Granites kanye Namatshe Wemvelo - Isevisi Ephelele
USalvatore Boncoddo Marble namaGranites eMessina, ihlala ihlinzeka ngezinto ezincane zabantu ngamunye kanye nezinsiza ezinkulu zamabhizinisi ngamanani ancintisanayo, ngaphandle kokukhohlwa Ikhwalithi. Ezitolo zenkampani ungathola Imabula yemvelo kazwelonke neyangaphandle, amatshe agolide namatshe emvelo wazo zonke izinhlobo, kanye nezithako zangempela. Le nkampani iphinde ibhekwe ngokukhethekile ekwakhiweni, ekunikezelweni nasekufakweni kwazo zonke izinhlobo zokucutshungulwa, zombili izinkampani nabantu, okuyinto ethola ukubonga okuseqophelweni eliphezulu ngokubambisana nabachwepheshe bakweminye imikhakha (Umqambi, Onjiniyela Nabaqambi) [Funda futhi lapha]. Ngaphezu kwalokho, ifemu ye USalvatore Boncoddo Marmi inikeza bonke ubuchwepheshe bayo kulezi zinsizakalo ezilandelayo:
I-Disassembly, ukubuyisela kabusha nokuvuselela iziqalo zekhishi nokugeza
Ukuphakelwa kanye nokufakwa kwezembozo zomlilo
Ukuhlanza nokubopha imbobo
Izinyathelo emabhulwini nase itsheni
ISalvatore Boncoddo Marble processing eMessina - Indlunkulu eyodwa eGazzi
USalvatore Boncoddo Marmi, eMessina, ngenxa yothando lomsebenzi wabo kanye nesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-40 emkhakheni we Ukuqhutshwa kwemarble, ingaziqhenya ngokuba ngesinye sezitolo zemabula ezikhethekile eMessina kanye nesifundazwe saso. Thembela USalvatore Boncoddo Marbles nama Granites kusho ukuba nesiqiniseko sensizakalo enobuchwepheshe obukhulu, Ukukhetha okubanzi kwezinto zokwenziwa zase-Italy nezangaphandle, ngokuphepha kwensizakalo yosizo esebenza kahle. Zonke lezi zici ezihlanganiswe nokusesha okuqhubekayo kokuqamba, ukunaka imininingwane, futhi ekugcineni ikhono nenhlonipho yabasebenzi abakhethekile, ziyizizathu zobuholi benkampani nokuthembela okuqhubekayo okuvuselelekile kwamakhasimende ayo. Vakashela inkampani ku ngeBonsignore 28, a Messina, futhi uthembele ku-Pluriennal Experience ye Salvatore I-Boncoddo Marmi - Iyacubungula iMarble Granite kanye Namatshe Asemvelo.
Ikheli: Nge-Bonsignore, i-28 ZIR
I-POSTAL CODE: 98125
Ucingo: 090 2938000
Umakhala ekhukhwini: 339 7362029
Yefeksi: 090 2936245
Inombolo ye-VAT: 00112620836